filename.xls 'Ayikwazi Ukufinyelelwa
Ikhaya > Imikhiqizo > DataNumen Excel Repair > filename.xls 'Ayikwazi Ukufinyelelwa.
Imininingwane eningiliziwe mayelana nephutha le- "filename.xls 'Ayikwazi Ukufinyelelwa"
Lapho uvula ifayela elonakele noma elonakele le-Excel XLS noma le-XLSX nge-Microsoft Excel, ubona umyalezo wephutha olandelayo:
'filename.xls' ayikwazi ukufinyelelwa. Ifayela kungenzeka lifundwa kuphela, noma ungahle uzame ukufinyelela indawo yokufunda kuphela. Noma, iseva idokhumenti egcinwe kuyo kungenzeka ingaphenduli.
lapho 'filename.xls' igama lefayela le-Excel elonakele.
Lapho ifayela le-Excel XLS noma le-XLSX lonakele futhi i-Microsoft Excel ingakwazi ukulibona, i-Excel ingabika leli phutha. Imininingwane yephutha iyadukisa ngoba ithi ifayela alikwazi ukufinyelelwa ngoba lifundwa kuphela. Kodwa-ke, ngisho nefayela uqobo ALUFUNDWA kuphela, uma lonakele, i-Excel isazobika leli phutha ngephutha.
Ungaqala uhlole ukuthi ngabe ifayili lifundwa kuphela, endaweni yokufunda kuphela, noma kuseva ekude. Uma ngabe ifayili lisendaweni efundwayo kuphela noma kuseva ekude, bese uzama ukukopisha lelo fayela kusuka endaweni yokufunda kuphela noma iseva kudrayivu ebhaliwe kukhompyutha yendawo. Qiniseka ukuthi ususa imfanelo yokufunda kuphela yefayela le-Excel.
Uma ifayili le-Excel lisengakwazi ukuvulwa, lapho-ke singaqinisekisa ukuthi ifayela lonakele. Ungaqala ukusebenzisa Umsebenzi wokulungisa owakhelwe ngaphakathi we-Excel ukulungisa ifayela elonakele le-Excel. Uma lokho kungasebenzi, kuzosebenza kuphela DataNumen Excel Repair kungakusiza.
Isampula ifayela le-XLS elonakele elizodala iphutha. Iphutha5.xls
Ifayela elitholwe ngu- DataNumen Excel Repair: Iphutha5_fixed.xls